FEIYUTECH Vlog Pocket 2 - famerenana gimbal - SmartMe
Tsy dia fantatro loatra ny momba ny sary, fa hatramin'ny nanombohako nanoratra famerenana sy firaketana kely dia hitako fa nila zavatra izay hanampy ahy hitazona ny telefaona amin'ny toerana mahazatra sy hampihena kely ny vokatry ny tanana mihozongozona kely. Nikaroka kelikely aho ary farany dia nihazakazaka tany amin'ny FEIYUTECH Vlog Pocket 2. gimbal. Ka nanapa-kevitra ny hanamarina raha izany no fitaovana mety.
Izany no nanombohan'ny zava-niainako voalohany niaraka tamin'ny gimbal. Tsy mpaka sary be fitakiana aho, fa vetivety dia holazaiko aminao ny fomba fiasa niaraka tamin'i FEIYUTECH Vlog Pocket 2.
Inona no ho hitantsika ao amin'ilay boaty FEIYUTECH Vlog Pocket 2?
Rehefa avy nanokatra ilay boaty isika dia hahita:
boky fampianarana (Quick Start Guide) amin'ny fiteny maro - tsy misy poloney;
USB mankany amin'ny tariby USB-C;
Mety tsy dia be loatra izany. Na izany aza, ho an'ny laika toa ahy, ireto singa ireto dia be loatra.
Andao hojerentsika ny masontsivana ara-teknikan'ny FEIYUTECH Vlog Pocket 2:
modely: FeiyuTech Vlog Pocket 2
fitaovana: PC, PA6
Mitongilana: 165 ° (isan-karazany ny fihodina)
Roll: 323 ° (elanelan'ny fihodinana axis)
Pan: 330 ° (elanelan'ny fihodina)
refin'ny gimbal misokatra: 24,8 x 9,4 x 6,4 cm
refy gimbal mivalona: 14,6 x 11,1 x 5,8 cm
lanja: 272 g (tsy misy kojakoja)
fahafaha manainga: 250 g
tendrombohitra: 1/4 ″ tripod vehivavy
seranan-tsambo: USB C
famatsiana herinaratra: batterie anatiny (7.4 V / 1300 mAh / 9.62 Wh)
ora fiasana amin'ny vola tokana: hatramin'ny 9 ora (miaraka amin'ny 150 g)
ora famandrihana bateria: sahabo ho 1,5 h (ho an'ny charger 5V / 2A - voarara ny famahana haingana)
Fifanarahana: smartphone mavesatra hatramin'ny 250 g ary sakan'ny 41 hatramin'ny 89 mm
fampiharana: "Feiyu ON" ho an'ny Android (6.0+) sy iOS (9.0+)
Araka ny efa fantatrao angamba, ny gimbal dia miavaka amin'ny hoe afaka milalao kely amin'ny toe-javatra amin'ny tanana iray isika. Tsy maintsy ekeko fa manana bokotra milamina ity fitaovana ity izay manamora ny fifehezana azy. Amin'ny lafiny ankavanana, ny gimbal dia manana bokotra fanombohana sy famonoana ary seranan-tsambo iray.
Misy bokotra 4 eo aloha:
bokotra ampiasaina hanovana fiasa (M),
bokotra fanaraha-maso gimbal.
Eo amin'ny ilany havia no ahitantsika ny bokotra zoom. Ary eo an-damosinay dia manana "bokotra Trigger" ahafahanao manidy ny gimbal amin'ny toerana iray izy.
Ao amin'ny boky torolàlana no hahitanao ireo toerana sy fiasa malaza indrindra azontsika atao. Misaotra an'io fa fantatro fa rehefa tazonintsika elaela kokoa ny bokotra sary dia handray andiana tifitra maromaro isika, ary ny tsindry indroa amin'ny bokotra M dia hanova ny toerana misy ny telefaona manomboka amin'ny marindrano mankany amin'ny volo ary ny mifamadika amin'izany.
Fampiharana izay miasa amin'ny FEIYUTECH Vlog Pocket 2
Mazava ho azy fa tsara kokoa ny mampiasa ny rindranasan'ny mpanamboatra, satria eto no hampiasantsika ny fitaovana tsara indrindra, fa ny gimbal koa dia miasa miaraka amin'ny rindranasan'ny rafitra finday sy ny rindranasa hafa. Afaka misafidy ny loko ianao. Ao amin'ny rindranasan'ny mpanamboatra, araka ny nolazaiko, afaka milalao safidy isan-karazany isika:
fametrahana toe-javatra (2s, 5s, 10s),
ny feon'ireo sary nalaina,
mifamadika eo anelanelan'ny fakantsary aloha sy aoriana,
fametrahana ny maody sary (panorama haingana, panorama, zoro mivelatra, panorama 360 degre sns),
fanovana fomba maody toy ny mihetsika miadana.
Ary izay rehetra azontsika antenaina amin'ny sehatra gimbal. Ny fiasa rehetra dia azo jerena amin'ny pikantsary etsy ambany.
Fiheverana voalohany sy fampiasana
Ekeko fa tamin'ny voalohany dia nanana olana kely tamin'ny fomba fananganana sy fampifandraisana ny finday amin'ny gimbal aho. Ity no gimbal voalohany nataoko, koa tsy mahagaga izany.
Ny gimbal mihitsy no mahazo aina ary mitazona azy tsara eny an-tananao. Somary maivana ihany izy io, ka na ny malemy toa ahy aza dia afaka miara-miasa aminy mandritra ny fotoana maharitra nefa tsy mahazo aina. Ny bokotra dia apetraka tsara ihany koa ary na toy inona na toy inona ny haben'ny tananao dia tsy hisy olana amin'ny fampiasana isan'andro.
Ao anaty boaty, mazava ho azy, misy stiker misy marika amin'ny fomba fametrahana ny telefaona ary inona no hatao mba hampandeha tsara ny zava-drehetra. Mazava ho azy fa noroahiko izy ireo, saingy tadidiko fa rehefa mametraka ny telefaona an-telefaona dia tsy maintsy eo an-tampony foana ny hello misy ny anarany. Mba hanombohana mampiasa ny gimbal dia mila esorinao ilay izy ary sokafanao ny saika ny faritra mihetsika alohan'ny hampifandraisana azy amin'ny telefaona. Ny hany zavatra sakananay dia ny ampahany lehibe amin'ny tripod mba tsy hivalona ilay fitaovana. Raha tsy izany dia azo inoana fa hanomboka hitomany ilay fitaovana ary hiantsoantso hoe nisy zavatra tsy nety.
Mifandray amin'ny FEIYUTECH Vlog Pocket 2 amin'ny alàlan'ny Bluetooth izahay ary rehefa afaka kelikely dia afaka maka sary sy rakipeo izahay. Ary eo amin'ny efijery fampiharana dia ho hitantsika ny mari-pamantarana ho an'ny fitaovana roa. Noho io dia afaka mifehy isika raha misy zavatra tapaka tsy nahy. Ny tripod koa mandeha. Milamina izy io ary rehefa ampiasaina dia tsy ilaina ny manahy ny amin'ny fahatapahan'ny telefaona. Io dia fampidirana azo antoka momba ity fitaovana ity.
Raha ny fahitako azy dia fitaovana tena milay be ho an'izay rehetra maka sary sy mirakitra horonan-tsary amin'ny alàlan'ny findainy. Noho ny faharetan'ny bateria mandritra ny fotoana maharitra dia azonao atao ny manoratra betsaka amin'ity fitaovana ity (raha tsy mahazaka azy ny telefaoninao;). Raha mila izany dia afaka manana powerbank miaraka aminao foana ianao hanitatra ny androm-piainan'ny FEIYUTECH Vlog Pocket 2 rehefa ilaina izany. Na izany aza, heveriko fa tsy mila izany ianao raha toa ka mameno ny fitaovana alohan'ny dia.
Ny miampy iray hafa dia ny mora ampiasaina ny gimbal. Mora ny mametraka ao anaty kitapo na kitapo. Tsy mila toerana be dia be izy io, ary azonao atao ny mametraka ny tariby sy ny tripod miaraka amin'ny FEIYUTECH Vlog Pocket 2 amin'ity tranga ity. Vantany vao nahazatra azy aho ary nianatra nampiasa azy, dia nety tsara izany. Mampalahelo fotsiny fa sarotra be izao ny mandeha izao. Somary manenina aho fa tsy nanararaotra niara-nilalao taminy intsony.
Amin'ny ankapobeny, omeko anao ity fitaovana ity. Tena ilaina izy io ary raha mila zavatra handraketana horonantsary amin'ny findainao finday ianao dia ho safidy tsara ny FEIYUTECH Vlog Pocket 2.
Hitako fa misy ihany koa ny kinova mavokely ary mampalahelo fa izaho, mpankafy ny zavatra rehetra mavokely, dia tsy nanana. Saingy tsy tokony hatao - tsara ihany koa ny mainty!
FEIYUTECH Vlog Pocket 2 dia azo vidiana amin'ny tranokalan'ny mpanamboatra eo ambanin'ity rohy.
Ho hitan'ny iPhone ny entana very. Tsy ireo avy any Apple ihany!
Apple dia namorona hevitra vaovao hafa tamin'ny endrika AirTags, izay natao hanampiana hahita zavatra very. Ny vokatra dia azo jerena amin'ny alàlan'ny fampiharana Locator sy ny Findy My function. Apple dia tsy miasa mangina, na ...
Modely Apple vaovao amin'ny vidiny fampiroboroboana. Mendrika mividy?
paoma, iPhone, iPhone 12 mini, fisondrotana
Vao tsy ela akory izay, be ny resaka momba ny maodely miniana iPhone 12, izay, na eo aza ny halehibeny, araka ny angatahin'ireo mpampiasa maro, dia tsy niteraka fahatsapana firy tamin'ny tsenan'ny smartphone. Manomboka izao, ny vokatra Apple dia azo vidiana amin'ny vaovao ...
Ny iPhone 11 Pro dia tafavoaka velona iray volana tany ambanin'ny farihy nivaingana!
paoma, iPhone, iPhone 11 Pro
Vao haingana i Apple no nirehareha momba ny faharetan'ny iPhone 12, izay mila valiny vaovao amin'ny faritra fitaratra amin'ny trano. Mandritra izany fotoana izany, ny iPhone 11 Pro dia nijanona teo ambanin'ny farihy nivaingana nandritra ny iray volana! Faharetana mahatalanjona Araka ny notaterin'ny CTV News ...